Mapurasitiki Ekushandisa, Plastic Mould, Plastic jekiseni - Chapman
Welcome to Chapman Maker kambani, It rakaumbwa muna 2008. Tine SGS advertising uye ISO 9001 yepamusoro utariri hurongwa.
Tinotarira mapurasitiki Kuumbwa kukura; dzakaonda uye gobvu pamadziro kuumbwa, yakasimba shiviriro kuumbwa, LSR kuumbwa, nyowani chigadzirwa kuvandudza uye gungano. Isu tinoshandira misika yakati wandei inosanganisira maindasitiri, Zvemotokari, Zvokurapa, Zvemagetsi, Dziviriro, Kutakura uye Mutengi. Isu tinogara tichipfuura zvinotarisirwa nevatengi vedu nekupa simba vese vanobatana uye nekugadzira tsika inogamuchira kuvandudzwa, kusimba kwekugadzira uye kudyidzana-kwekudyidzana kushandira kuona kukosha kwakanyanya kune vatengi vedu.
5-30 Mazuva Lead nguva
Mwedzi 300-500K Jekiseni Kukwanisa
35-50 Sets / Mwedzi Mould Unyanzvi
Plastic Mould & jekiseni
Zvivakwa zvedu zvekuumba zvinopa mukana wekumhanya mukumhanya kwese mhando dze thermoplastic zvinhu. Isu tine hunyanzvi mukugadzira zvigadzirwa zvehuwandu hwakawanda hwekushandisa pamwe nemaindasitiri akasarudzika anosanganisira ekurapa, zvemagetsi zvigadzirwa, zvinongedzo, maindasitiri, kudzivirira, kutakura, uye mutengi.
Tiine zvirimwa zvina uye 50 + jekiseni zvichibva pamakumi matanhatu kusvika mazana mashanu ematani, tinokwanisa kugadzira zvinhu zvidiki diki se .75 ounces kusvika kuzvivharo zvakakura sema80 ounces (5 lbs). Tinogona kukubatsira mukugadzirisa uye kugadzirisa chigadzirwa chako dhizaini kuti uwane zvakanakisa mhedzisiro yekusangana nezvinodiwa zvechikamu.
Vertically Yakabatanidzwa Kugadzira
Wakaonda uye Mutete Wall Kuumbwa
Kushongedza & Kuongorora
Sangana neyako yose
Yedu-mumba yechipiri mashandiro inobvisa vekunze vatengesi, ichichengetedza huwandu hwakawanda hwekutungamira-nguva uye mutengo kune zvese zvigadzirwa zvako.
In-Imba Sekondari Kushanda:
Chikamu Chekubatana: Inonamira Kubatana, Kupisa Kwekupisa
Pad Kudhinda uye Kushongedza
Mechanical & Electro-Mechanical Magungano uye Kuedza